बकम्फुसे कागजमा हस्ताक्षर, विश्वास र सकस
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिबकम्फुसे कागजमा हस्ताक्षर, विश्वास र सकस
देशको कार्यकारी प्रमुख भएरै के गर्नु ? यो पदसँग जोडिएका हाम्रा ओल्बाको सकस कम्तीको छैन । उनको सकस देखेर कन्टिर–बाबूलाई कहिलेकाहीँ यिनीप्रति माया पनि लागेर आउँछ तर के गर्नु ती सकस साट्न सकिन्न ।
हावा नचली पात नहल्लिने र आगोको झिल्को नबली धुवाँ नदेखिने पौराणिक कथन सम्झिँदै तपाईँहरू पनि यो अनुमानको झमेलामा नपर्नुहोला ।
ओल्बाले प्रधानमन्त्री पद छोड्ने होइनन्, कसैलाई दिने होइनन् । यस्तोमा कन्टिर–बाबूले चिन्ता फिक्री लिएरै के गर्नु ? तपाई दुई–चार दिन रेस्ट गर्नुहोस्, तपाईको पदअनुसारको काम कन्टिर–बाबूले गरिदिन्छन्, सकस र तनावको जिम्मा लिन्छन् भन्न नमिल्ने ! विचरा ओल्बालाई नाना भाँती भाउँतो आइलाग्ने । सबै कुरा आफैँ गर्छु भन्ने एकोहोरो व्यवहारका कारण पनि तिनले समस्या बेहोर्न बाध्य भएका हुन् भन्ने कन्टिर–बाबूको ठहर छ ।
देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यस्तो बकम्फुसे कागजमा हस्ताक्षर धस्काए होलान् भन्ने कुरामा कन्टिर–बाबू किमार्थ विश्वास गर्दैनन् । तर यसको छानबिन भने हुनुपर्छ ।
अ ब हेर्नुस् न, पछिल्लो भाउँतो आइलागेको । ओल्बा पनि को–कोसँग भेट्छन्, के–के सम्झौता गर्छन् अनि पछि समस्यामा पर्छन् । हालै ओल्बाले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का मुख्यासँग के भेटेका थिए भन्ने चर्चा जताततै व्याप्त छ । खबर सुनेदेखि ओल्बालाई लोकले खेदेको–खेदेकै छ ।
विचरा ओल्बाको सत्ता टिकाउने ‘राष्ट्रियता’को हतियार पनि भुत्ते साबित हुन पुगेको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र कुन चाहिँले ती मुख्या र ओल्बाको सही राखेर चारबुँदे सहमतिको एउटा कागज सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याएछन् । एकाबिहानै भाइरल भइगयो ।
हैट् ! यस्तो पनि हुन्छ ? त्यो कागज पक्कै पनि फेक हुनुपर्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यस्तो बकम्फुसे कागजमा हस्ताक्षर धस्काए होलान् भन्ने कुरामा कन्टिर–बाबू किमार्थ विश्वास गर्दैनन् । तर यसको छानबिन भने हुनुपर्छ ।
कन्टिर–बाबू भन्छन्, ओल्बाको होस् चाहे कसैको पनि चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन । यो त एक प्रकारको गम्भीर अपराध हो । अपराधीलाई कारबाही हुनैपर्छ । तर स्वतन्त्र छानबिन गर्दा कथम्कदाचित त्यो कागज सत्य ठहरियो भने ? त्यसपछि के होला हँ ? कन्टिर–बाबू त्यसको अनुमान पनि गर्न चाहँदैनन् ।
कन्टिर–बाबूको आग्रह छ– हावा नचली पात नहल्लिने र आगोको झिल्को नबली धुवाँ नदेखिने पौराणिक कथन सम्झिँदै तपाईँहरू पनि यो अनुमानको झमेलामा नपर्नुहोला । जे–जे होला, होला नि !
भाउँतो विश्वास हस्ताक्षर